UDavid Plummer, owayengunjiniyela weMicrosoft waqhathanisa iLinux neWindows | Kusuka kuLinux
Iminyaka eminingi bekukhona ukungqubuzana phakathi kweWindows neLinux kuze kube namuhla kusalokhu kufinyelela kumphakathi wonjiniyela.
Futhi kungale kwezimpikiswano ezishubile ukuthi ngaso sonke isikhathi kuvusa lokhu kungqubuzana, UDavid Plummer, unjiniyela osethathe umhlalaphansi obesebenza kwezentuthuko UWindows, unikeze umbono wakhe, umbono wokuthi ngizama ukuba ongakhethi ngempumelelo enkulu.
UDavid Plummer usebenze kwiWindows kusukela ezinsukwini ze-MS-DOS neWindows 95. Ungumbhali wezimpumelelo eziningi ezifana neWindows Task Manager, iZip File Support yeWindows, phakathi kokunye, enamalungelo obunikazi ayisithupha emkhakheni wobunjiniyela be-software.
Noma kunjalo, iqiniso Ukuthi usebenzela iMicrosoft akuzange kumvimbe ekusekeleni ukuthuthukiswa kweLinux, njengoba echaza isibonelo, ukuthi ekuqaleni kweminyaka yama-90, walungisa ezinye izinkinga kumthombo womthombo weLinux ngaphambi kokuzithumela kuLinus Torvalds.
Unjiniyela osethathe umhlalaphansi trató ukwenza ukuqhathanisa phakathi kweWindows neLinux kuhlaziywa amasistimu amabili wokusebenza avela kuzici ezahlukahlukene: ukusetshenziswa, izibuyekezo kanye nokuvikeleka.
Isitatimende esinamandla UDavid Plummer, uthi iLinux Kushiwo kahle "Ayinayo i-interface efanele yomsebenzisi ngale komugqa womyalo '.
Lo mugqa womyalo ungaba namandla amakhulu, ikakhulukazi uma ungumlandeli weBash noma iZsh, phakathi kwabanye, kepha awukwazi ukukuchaza njengokulula kakhulu ukukusebenzisa, ”usho kanje.
Akulenzi iqiniso lokuthi ukusatshalaliswa okuningi kweLinux namuhla kuza ne-interface yomsebenzisi wedeskithophu kulabo abayithandayo.
"Kodwa njengomklami wegobolondo, uma ngingaba nesibindi esinjalo, imvamisa iba mibi kakhulu," uyengeza. Ngaphambi kokucacisa ukuthi ukusatshalaliswa kweMint kuyinto ehlukile enesimo esibonakalayo esihle.
“Ngakolunye uhlangothi, iWindows ifaka phakathi i-default desktop shell interface okuthi uma uyishiya ngokuphelele i-aesthetics yedizayini eyakheke ngokuphelele, yakhelwe ngobungcweti, yahlolwa ukuze isetshenziswe emazingeni wokusebenzisa, futhi ibhekele amazinga ehlukene edizayini. Ukufinyelela kudingwa ngabantu abanemikhawulo ehlukile. Mayelana nokusebenziseka, ikakhulukazi uma ukufinyeleleka kufakiwe kuleyo metric, iWindows ivelele, ”kusho yena.
Ekuvuseleleni, uDavid Plummer uyadumisa iqiniso lokuthi abasebenzisi be AmaWindows anakekelwa kahle yithimba le-Windows Update elizinikele eMicrosoft.
Nokho, uyazisola ngokuthi inqubo kwesinye isikhathi iyinkimbinkimbi, ngokungafani neLinux:
"Kulula kakhulu ukuvuselela uhlelo lweLinux, futhi noma ngabe lingekho iqembu lochwepheshe elizophendula ekusetshenzisweni kwezinsuku ezingama-zero, izibuyekezo ziphuma ngokushesha futhi kwezinye izimo, ungavuselela i-kernel ngaphandle kokuqalisa kabusha," usho njalo. .
Vele, ezinye izingxenye ze-Linux kernel zizodinga ukuqala kabusha ngesikhathi sokuvuselelwa, njengoba kuzokwenza ezinye izingxenye zohlelo lweWindows. Kodwa-ke, owayengunjiniyela we IMicrosoft ikholelwa ukuthi iWindows idinga ukuthi uhlelo luqale phansi kaningi kakhulu.
Edlulela esihlokweni sezibuyekezo, ukhumbule ukuthi ngokuvamile zikhululekile emhlabeni womthombo ovulekile, ngaphandle kokuthi usebenzisa ukusatshalaliswa okuchazwe ngaphambilini okuvela kumthengisi.
UPlummer ukholelwa ukuthi isoftware yomthombo ovulekile ivulekele ubungozi security, ngoba, ezinye izinto zilingana, kulula ukuthola izintuba kusoftware yomthombo ovulekile ongayisebenzisa.
"Ngicabanga ukuthi kuyiphutha elincane ukwethemba [umthetho kaLinus]," kuphetha yena. Kodwa-ke, ucabanga ukuthi iLinux iphephe kakhulu. Ukholelwa ukuthi iWindows ithandwa kakhulu kangangoba ilitshe elikhanga kakhulu kubadlali abanonya. Futhi, iningi labasebenzisi beWindows ligcina wonke amalungelo okuphatha.
UDavid wehla futhi uqhathanise iWindows neLinux kweminye imibandela efana nokwenza ngezifiso, imibhalo nomphakathi. Uma kukhulunywa ngokwezifiso, njengoba ungaqagela, cabanga ukuthi iLinux yenziwe ngezifiso kakhulu, ngoba uhlelo lokusebenza luwumthombo ovulekile.
Kulula ukufaka izici ezintsha Ngaphandle kwalokho, kwanele ukuphakamisa okumbalwa. Uma uLinus Torvalds nabaholi bephrojekthi bezwa ukuthi ukusebenza okuphakanyisiwe kuyadingeka, kuzohlanganiswa. Ngaphandle kwalokho, kusenokwenzeka ukufaka igatsha bese ufaka umsebenzi uma wenqatshwa.
Lokhu futhi kuyenzeka emphakathini, ngokwesibonelo uDebian wenze imfoloko ngenxa ye-sytemd ngaleyo ndlela evumela uDevuan ukuba avele, kanti ngeWindows, ukufaka noma ukususa imisebenzi kunzima kakhulu.
Mayelana nemibhalo, owayengunjiniyela weMicrosofngikholelwa ukuthi imvamisa akukho mibhalo engcono kunekhodi yomthombo nokuthi iLinux iyatholakala emphakathini. Okuyibhonasi. Kodwa-ke, nge-MSDN, iMicrosoft inikeza imibhalo esezingeni eliphakeme kakhulu.
Ekugcineni, umphakathi futhi uDavid Plummer ukholelwa ukuthi iMicrosoft yenza umehluko, ngokususelwa ekuhlaziyweni kwezinkundla ezidumile ze-IT, njengoba umphakathi weMicrosoft mkhulu futhi uphendula ngokwengeziwe - ukubukwa okuningi, izimpendulo eziningi, nezimpendulo eziningi kwimibuzo ehlobene neWindows kuneLinux imibuzo ehlobene.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » UDavid Plummer, owayengunjiniyela weMicrosoft waqhathanisa iLinux neWindows